New Edition – AsiaApps
တရားဝင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus6Red edition
July 11, 2018 July 11, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on တရားဝင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus6Red edition
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းကတရားဝင်ကြေညာခဲ့တဲ့ OnePlus6Red edition ဟာအခုဆိုရင်တော့ တရားဝင်ရောင်းချနေတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ OnePlus6Red edition ကို 8GB RAM + 128GB Storage…
Samsung Galaxy S9 Sunrise Gold edition ရဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပြီ
May 18, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Samsung Galaxy S9 Sunrise Gold edition ရဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပြီ
Samsung Galaxy S9 ရဲ့ Color option အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sunrise Gold edition ကတော့ Mobile tipster တစ်ဉီးဖြစ်သူ Evan Blass ရဲ့ Tweet post ကနေတဆင့်သိရှိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sunrise Gold…
Samsung Galaxy S9/S9+ တို့ရဲ့ Red edition ကတော့ တရုတ် Official website မှာဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရပြီနော်
May 8, 2018 May 8, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Samsung Galaxy S9/S9+ တို့ရဲ့ Red edition ကတော့ တရုတ် Official website မှာဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရပြီနော်
Samsung အနေနဲ့ Galaxy S9/S9+ ကို Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple အစရှိတဲ့ Color option ၄ မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန်အနည်းကပဲ…
April 10, 2018 April 10, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on UK မှာမကြာခင်ထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့ OnePlus6ရဲ့ Avengers: Infinity War limited-edition
Superhero fan တွေရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ Avengers: Infinity War မှာလက်ရှိ Major brand အဖြစ်ပါဝင်အားဖြည့်ထားတာကတော့ Coca-Cola, Quicken Loans, Ziploc နဲ့ တရုတ်စမတ်ကုမ္ပဏီ OnePlus တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus ဟာ…
Red Edition နဲ့ iPhone X ကို မြင်တွေ့ချင်ကြလား ?
March 28, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Red Edition နဲ့ iPhone X ကို မြင်တွေ့ချင်ကြလား ?
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကလည်း Blush Gold Edition iPhone X ရဲ့ rumor လေးတစ်ခုကိုအားလုံးပဲသိပြီးလောက်မှာပါ။ (Asiaapps ကိုဝင်ကြည့်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့.. အယ်လယ် ?)။ အခုလည်းထိုနည်းတူ iPhone X ရဲ့နောက်ထပ် Rumor လေးတစ်ခုထပ်မံထွက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။ Red…
Moto X4 version အသစ်ကိုဖြန့်ချီတော့မယ့် Motorola!
January 25, 2018 January 25, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Moto X4 version အသစ်ကိုဖြန့်ချီတော့မယ့် Motorola!
Motorola အနေနဲ့ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ဖန်တီးထားတဲ့ Moto X4 ရဲ့ version ကိုတော့ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ Motorola India ကနေသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ Strap in to soon…
အိန္ဒိယကိုမကြာခင်ရောက်ရှိတော့မယ့် Oneplus 5T ရဲ့ Lava Red Edition!
January 12, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on အိန္ဒိယကိုမကြာခင်ရောက်ရှိတော့မယ့် Oneplus 5T ရဲ့ Lava Red Edition!
Oneplus 5T ရဲ့ edition အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lava Red ဟာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ Amazon India ကသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ကစပြီး…
Official ထွက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 5T Sandstone White Limited Edition!
January 8, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Official ထွက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 5T Sandstone White Limited Edition!
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က Oneplus အနေနဲ့ YouTube Official Channel မှာ OnePlus 5T Sandstone White Limited Edition အတွက် Teaser Video လေးတစ်ခု…